चौराठामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न – Newsrara
“नाैमूले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता सिंह नाैमूले गाउँपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष माेहन राना लगाएतका पदाधिकारी संयुक्त रूपमा याेजनाकाे अनुगमन गर्दै”
मातृभूमी संवादाता । १४ माघ दैलेख
नौमूले गाउँपालिका वडा नं. ८ चौराठामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । चौराठामा गोरखा वेलफर ट्रसद्धारा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमको मध्यवधि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सार्वनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नौमूले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अतिथि अमृता सिंहले दिगोरुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिईन् । उपाध्यक्ष सिंहले यो योजना सम्पन्न भए पश्चात सम्पुर्ण वडावासीहरुको शुद्ध खानेपानी र सरसफाईमा पहुँच पुग्नेमा आफु आशावादी रहेको वताईन् । विषेश अतिथि तथा नौमूले गाउँपालिका ८ का वडा अध्यक्ष मोहन रानामगरले वडाको आवश्यकता अनुसार नै कार्यक्रम सञ्चालन भएकोले यस्ता योजनाहरुको दिगोपनाका लागी वडावासीले पनि विषेश ध्यान दिनु पर्ने वताए । उनले आगामी दिनहरुमा यस्ता कार्यक्रमहरु वडामा भित्र्याउन जरुरी रहेको वताए ।
गोरखा वेलफर ट्रसका कार्यक्रम संयोजक विरवहादुर पुनमगरले आयोजना ५० वर्ष सम्म दिगो रहने वताएका छन् । यस योजना अन्र्तगत वडाभरी १ सय १६ वटा धारा निर्माधिन अवस्थामा रहेका छन् । योजनाको कुल लागत ९५ लाख रहेको छ भने वडावासीहरुले ३३ लाख वरावरको श्रमदान गरी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको संयोजक पुनले वताए । वडामा यति ठुलो योजना पहिलो पटक संचालन भएको र यो योजना वडामा भित्र्याउनका लागी वडाअध्यक्ष मोहन रानामगरको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको भन्दै स्थानीयवासीले प्रसंसा समेत गरेका थिए ।
झ्याउखोला खानेपानीको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न
नौमूले गाउँपालिका ८ चौराठामा झ्याउखोला खानोपानी योजनाको पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वडा सदस्य दिपक हमालले योजनको काम दिगो हुने गरी सम्पन्न गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रमका अधिकांस सेवाग्राहीले योजना दिगो नभएको, गुणस्तरीय नभएको लगाएतका गुनासो गरेका थिए । फिनिडा अन्तरग संचालन भएको झ्याउखोला खानेपानी योजनाले वडामा ४६ धारा निर्माण गर्नेछ । साथै वडाका वुद्धिजीवी विरवहादुर चन्दले योजना दिगो तथा गुणस्तरीय वनाउन सुझाव दिएका थिए ।